Veloma, “Online.” Manahoana, HTTPS! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2015 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Italiano, বাংলা, عربي, Español, English
Tamin'ny 7 Novambra 2014 i Ethan Zuckerman nanambara fa andeha hiady. Ny anaran-tsehatra an-tranonkala notsiriritinay tao anatin'ny folo taona dia vonona indray ny horombahina, ka na ho any amin'ny afobe na ho any amin'ny rano ambony dia handeha hahazo azy izy.
Ny anaran-tsehatra dia globalvoices.org, izay, raha nitongilana nankany amin'ny iray hatrany izao tontolo izao, dia ny adiresy Global Voices no hitan'ny mpitsidika amin'ny mpitetiny amin'ny andro ivoahan'ny tranonkala Global Voices tamin'ny 2005. Saingy raha iverenana ny tamin'izany fotoana izany dia efa lasan'ny fikambanan'olon-tsotra mirotsaka ho amin'ny mahaolompirenena madray andraikitra tsy mitady tombombarotra antsoina hoe AmericaSpeaks, izay tsy azo noresena lahatra hovidiana, ilay anaran-tsehatra. Lavabe avy eo ny sisa notsimponinay, dia ilay mavesa-be globalvoicesonline.org, izay nihatianay tsikelikely na dia miparitaka amin'ny sisin-karatra ara-pandraharahanay aza izany ary nahatonga ny olona hilaza anay ho “Global Voices Online”.
Ethan, Ilay mpiara-manorina tsy manan-tahotra, miomana ho amin'ny ady.
Nandritra ny taona maro izahay no nanara-maso no AmericaSpeaks sy ireo anaran-tsehatra tao aminy. Tamin'ny fanombohan'ny taona 2014, rehefa nahare izahay fa hikatona ry zareo rehefa niasa 19 taona, nanam-panantenana izahay fa tsy nahomby ny fifampiresahana ividianana ny hoentimihetsiky ny AmericaSpeaks. Avy eo tonga ny naoty avy amin'i Ethan tamin'ny 7 Novambra, nanambara fa ho alefa eny an-tsena ny globalvoices.org ary hifampiadiana ao amin'ny GoDaddy. Nanome firariantsoa azy izahay ary niandry ora maromaro nitazona ny fofon'aina, mampifamatotra ny rantsan-tanana sy ny rantsa-tongotra, samy mitazona ny odiny mitondra vintana.
Ny takarivan'io andro io tamin'ny 6 ora sy 07 minitra EDT, nisy imailaka tonga tao amin'ny vatamailakay ary ny lohateniny dia hoe “got it” [azo]. “Ka…,” nosoratan'i Ethan hoe, “isika izao no tompon'ny globalvoices.org.”
Raha tsy niaina tamin'ny vazan-tany efatr'izao tontolo izao izahay dia tsy isalasalana fa efa nisy tavoahangy champagne iray nisokatra, nefa na ny hafaliana viirtoaly aza dia efa navesatra sy nangorovitsika. Herinandro vitsivitsy monja mialoha ny hanamarihanay ny fahafolo taonan'ny tsanganana blaogy voalohany, ary vao herinandro vitsivitsy ihany koa izay no lasa ny fankalazana ofisialy ny fahafolo taonanay. Inona moa no fanomezana tsingerintaona fahafolo taona tsara kokoa noho ny fahafahana mampiasa tsara ny anaram-pikambanana amin'ny anaran-tsehatra!
Ametraho S eo aminy
Zavatra iray ny fahazoana anaran-tsehatra iray vaovao—ary asa lehibe iray efa niasana hatry ny ela ny fampetrahana izany amin'ny tranonkala mihoatra ny 30 anananay, amin'ny sehatra WordPress mivoaka amin'ny fiteny maro, indrindra moa fa mihevitra ny hampifandrindra izany amin'ny fipihana miala amin'ny HTTP mankao amin'ny tsara aro kokoa amin'ny HTTPS izahay.
MANINONA NO HTTPS? Tsy voaafintsoratra ny fifamoivoizana Internet mizotra amin'ny tranonkala HTTP, izay midika fa azo samborina sy araha-maso mora kokoa ny rakitahiry sy ny fihetsky ny mpiserasera. Ny HTTPS tonga dia manolotra fanafenan-tsoratra avy hatrany: Amin'ny alalan'ny mpitetinao [browser] ihany vao vahana ny fanafenantsoratra, ary tsy mora ny fahazoan'ny mpitsikilo mijery, manova na mandika ny rakitahirinao.
Tao anatin'ny volana maromaro izao, ny manampahaizana amin'ny teknolojia ato aminay monina ao Montreal antsoina hoe Jeremy Clarke, sy ny fanohanana avy amin'i Carl Alexander, no niasa hamahana hatramin'ny antsipirihany sy ny teknika rehetra ao anatiny ireo fomba roa tsy misy ifandraisany nefa mifandrohy ireo.
Tamin'ny 15 Septambra izahay no nanao ny famindrana anaran-tsehatra, ary tao anatin'ny fanatontosana azy dia nanokatra hatrany ny HTTPS amin'ny tranonkalanay lehibe rehetra. https://www.globalvoices.org izany amin'izao fotoana izao no adiresy hitanao amin'ny mpitetinao rehefa mitsidika ny vavahadin-tranonkalan'ny Global Voices amin'ny teny anglisy ianao, sy ny sampan'anarantsehatra toy ny Rising Voices sy ny tranonkalam-pandikanteninay mitondra ny globalvoices.org ihany koa ianao.
Miaraka amin'izany fifiindrana izany, ny Global Voices Advocacy, izay fantatry ny mpikambana sy ny namana akaiky hatry ny ela amin'ny anarana fohifohy kokoa hoe “Advox”, dia tsy maintsy nanesorana tarehintsoratra sivy avy amin'ny rohiny URL taloha ary lasa ilay mijoro tsara https://advox.globalvoices.org. Ao anatin'ny herinandro maromaro ho avy izy izahay dia handray amim-pireharehana ny Advox ho anarana ofisialy eo amin'ny marika sy ny fangon'ny tranonkala.
Fa tsy mbola vita ny asanay. Na dia efa miasa amin'ny maha HTTPS azy ary ny pejinay rehetra, dia fantatray fa mbola mila asa ny endrika sasantsasany amin'ny fanafenantsoraratra ao amin'ny rafi-pananganana mba hanaraka ny farany indrindra ao amin'ny arofenitra ara-piarovana. Saingy afa-mirerahareha izahay rehefa nahavita iny dingana firosoana lehibe iny. Arahabainay i Ethan, Jeremy ary i Carl tamin'ny asa mafy nataony nahatonga izao ho tontosa!